डाक्टरले जन्डिस झिक्ने बहानामा ब्लेडले पेट चिरेपछि... - Everest Dainik - News from Nepal
डाक्टरले जन्डिस झिक्ने बहानामा ब्लेडले पेट चिरेपछि…
धादिङ । विगत २ महिनादेखि जन्डिसले थलिएका ३९ वर्षीय राजु मगरको ज्यानै जोखिममा परेको छ । आफूलाई महायान लामा झाँक्री बताउने गजबहादुर लामाले पेटको जन्डिस चुसेरै निकाली दिन्छु भन्दै बिरामीलाई आफै घरमा बोलाएर ब्लेडले पेट चिरेका थिए । पेट चिर्नुअघि लामाले सूर्य पनि लगाएको आफन्तजनले बताए ।
जन्डिसको उपचार गरी शरीरको विकार फालिदिने भन्दै धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका ३ शान्तबजारका लामा झाँक्री गजबहादुरले बिरामीको पेटमा प्वाल पारिदिएका छन्। विगत २ महिनाअघिदेखि जन्डिसका कारण थलिएका नीलकण्ठ नगरपालिका –९ झगरेका राजुको शरीरबाट विकार निकालिदिने भन्दै झाँक्री गजबहादुरले पेटमा प्वाल पारिदिएका हुन्।
याे पनि पढ्नुस उपचारको नाममा झाँक्रीले पेटमा प्वाल पारिदिएका राजुको मृत्यु
५ सय मिटर नजिकैको शहिल मेमोरियल अस्पताल नगएर झाँक्रीको उपचारले चाँडै जण्डिस रोग निको हुने विश्वासमा पर्दा राजु यतिबेला जीवनमरणको दोसाँधमा पुगेका छन्। बोल्न समेत नसक्ने अवस्थामा पुगेका राजुलाई यतिबेला जिल्ला अस्पताल धादिङमा उपचारका लागि ल्याइएको छ।
‘अस्पतालमा उपचार गराएर घरमै औषधि खुवाइरहेका थियौँ, निको भएकै थिएन, ’राजुकी श्रीमती विमलाले भनिन,’ त्यसपछि झाँक्रीलाई देखाउँदा शरीरमा विकार रहेको र आफूले विकार निकालेर फालिदिने बताएपछि झाँक्रीको विश्वास गर्दा यस्तो घटना हुन पुग्यो।’
झाँक्रीले शरीरमा भएको विकार निकालिदिन्छु भन्दै बन्द कोठमा थुनेर ब्लेडले पेटमा चिरिदिएका थिए। सुरुमा झाँक्रीले सुई पनि लगाएको जस्तो गरी केही सामानले घोचेको र पछि ब्लेटले पेट चिरेर त्यही घाउमा मुखले टोकिदिएको कुरा श्रीमानले आफूलाई बताएको विमलाले बताइन्।
याे पनि पढ्नुस के हो जन्डिस ? यो कसरी शुरु हुन्छ ?
झाँक्रीले पेटमा प्वाल खोपिदिएर अवस्था झनै बिग्रिएपछि उनलाई उपचारका लागि काठमाडौं लगिएको थियो। तर काठमाडौं नयाँबजारस्थित पिपुल मेडिकल कलेजले अरुले बनाइदिएको घाउ आफूले नहेर्ने भन्दै पेटमा जमेको पानी निकालिदिएर फिर्ता गरिदिएको थियो। लामा विरुद्ध परिवारजनले जिल्ला प्रहरीमा उजुरी दर्ता गराएका छन्। लामा फरार रहेको प्रहरीले जनाएको छ।
लामा तान्त्रिक विधिद्वारा उपचार गराउँदै आइरहेका विवादित व्यक्ति पनि हुन। उनको यसअघि पनि केही घटना विवादमा आएका थिए। ३ वर्षअघि पनि धादिङ मुलपानीकै एक महिलाको पेटमा रहेको ५ महिनाको बच्चा उपचार गर्ने बहानामा हातैले निकालेर फालिदिएका थिए।
त्यसपछि ती महिलालाई प्रहरीकोमा उजुरी गर्न भनिएपनि लामा झाँक्रीले डरधम्की देखाएर तर्साएको महिला अधिकारकर्मी राधिका सापकोटाले बताइन्। उनले भनिन, ‘हामीले घटनाबारे थाहा पाएका थियौँ, प्रहरीकोमा उजुरी गर्न पीडितलाई आग्रह गरेँ पनि, झाँक्रीले पीडितलाई मन्त्र लगाएरै मारिदिन्छु भन्ने धम्की दिएकाले घटना त्यसै ढाकछोप पारिएछ।’ यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकबाट लिइएको हो ।
ट्याग्स: गजबहादुर लामा, जन्डिस, राजु मगर